Dhul gariir ka dhacay waqooyiga Iswiidhan. | Somaliska
Dhul gariir cabirkiisu dhanyahay 3.8 ayaa ka dhacay gobalka Västerbotten ayadoo aan dad ku dhaawacmin ayaa hadana awooda dhul gariirka uu ahaa mid culus. "Gurigayga ayaan fadhiyay markii shaykasta uu bilaabay in uu dhaqaaqo waxaan is dhahay tareen ayaa ku agmaraya ilaa 15-20 sakan ayuu socday , runtii waan cabsaday" ayay tiri Malin oo degen magaalada Skellefteå. "Markii uu dhamaaday shimbiraha ayaa bilaabay in ay kheyliyaan" ayay intaas ku dartay. Dhul gariirka xoogiisa ayaa u dhexeeyay magaalooyinka Skellefteå iyo Luleå. "Dhul gariiryo nuucaan ah sanadkiiba dhowr mar ayay dhacaan, waxayna ku badanyihiin meesha uu hada ka dhacay" ayuu yiri Reynir Bödvarsson oo ka tirsan Machadka la socoshada dhul gariiryada ee Uppsala. dhul gariirka ayaa dhacay 10.30 habeenimo. The Local
Dhul gariir cabirkiisu dhanyahay 3.8 ayaa ka dhacay gobalka Västerbotten ayadoo aan dad ku dhaawacmin ayaa hadana awooda dhul gariirka uu ahaa mid culus.
“Gurigayga ayaan fadhiyay markii shaykasta uu bilaabay in uu dhaqaaqo waxaan is dhahay tareen ayaa ku agmaraya ilaa 15-20 sakan ayuu socday , runtii waan cabsaday” ayay tiri Malin oo degen magaalada Skellefteå.
“Markii uu dhamaaday shimbiraha ayaa bilaabay in ay kheyliyaan” ayay intaas ku dartay.
Dhul gariirka xoogiisa ayaa u dhexeeyay magaalooyinka Skellefteå iyo Luleå.
“Dhul gariiryo nuucaan ah sanadkiiba dhowr mar ayay dhacaan, waxayna ku badanyihiin meesha uu hada ka dhacay” ayuu yiri Reynir Bödvarsson oo ka tirsan Machadka la socoshada dhul gariiryada ee Uppsala.
dhul gariirka ayaa dhacay 10.30 habeenimo.